Shanda kure neTeamViewer panguva yekurova
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 18, 2020 | hofisi
Pane nzira dzinoverengeka dzekuita shanda kure nechikwata. Nzira yakasarudzika zvikuru kuve hurukuro. Nekudaro, kuti vashande zvinobudirira, vashandi vanofanirwa kuziva chaizvo izvo vamwe vavo vari kuita. Kugovana Screen, senge izvo zvinopihwa neTeVVTrailer zvinogona ipapo kubatsira.
Chii chinonzi TeamViewer?
TeamViewer isoftware iyo inobvumidza iwe kuti upinde mukati uri kure. Mune mamwe mazwi, zvinokutendera iwe kuwana uye kudzora komputa iri kure. Iyo software inopa mukana wekushandisa uye mafaera pakombuta iri kure. Nekudaro, izvo zvinogona kuitika zvinogumira kune avo vanobvumidzwa nekombuta inomirira. Iyi software inogona kushandiswa zvese mubhizinesi kana nekuda kwezvikonzero zvakavanzika. Pane akasiyana akasiyana vhezheni yeWindows, Mac uye Linux michina. Shanduro dzenhare dziripo zvakare uye zvinokwanisika kuwana yako TeamViewer account kuburikidza newebhu. Iyo inozivikanwa zvakare kuti ndeimwe yeakachengeteka pamusika. Chokwadi, inoshanda zvakakwana pasina kumisa iyo firewall kana chero imwe software yekuchengetedza. Kuwedzeredzwa kwedata kwakavharirwa kuitira kuti pasave neanokuvadza anogona kuvaba. Pane maBhaibheri maviri esoftware akagadzirirwa akasiyana zvibodzwa. Iyo yevatengi vhezheni yakasununguka zvachose uye inogona kushandiswa pane chero inoshanda system. Iyo bhizinesi vhezheni inobhadhariswa uye mutengo wayo zvinoenderana nepuratifomu. Semuenzaniso, yenyaya yekushandisa paWindows, mutengo unotanga pa479 euros. Pamusoro pe gonesa rubatsiro kure, inopa vashandisi vayo zvimwe zvishandiso zvakawanda zvinochengetedza nguva pabasa. Ichi chishandiso chiri nyore nekuti chinokubvumira kuti uite basa pakombuta usinga uite kuve munyama. Iyo software inobatsira zvakare kubatsira mumwe wevashandi vako kugadzirisa dambudziko zvakananga paPC yavo.
TeamViewer inoshanda sei?
dira shandisa TeamViewer, iwe unofanirwa kutanga watora software kubva kune webhusaiti yepamutemo uye uiise. Iko kuisirwa hakuna kuoma, sezvo inokwana kutevera matanho anoratidzwa nechirongwa. Kuti uwane kombiyuta iri kure kuburikidza nesoftware, zvisinei, komputa inotarisirwa inofanira kunge yakaisawo TeamViewer. Pangotanga software iyi, ID ne password zvinopihwa. Izvi zvichabatsira kubvumira mutengi ari kure kuwana komputa. Nekudaro, iyi data inoshandura nguva imwe neimwe software yacho yakavhurwazve. Iyi sisitimu inodzivirira vanhu yaimbove yakabatana necomputer kuti isvike zvakare pasina mvumo yako. TeamVviewer zvakare ine chinodaidzwa seti musasa Icho chishandiso chinoshanda kubvumira maTeki matekiniki ekupa kure kwechigadzirwa rutsigiro. Musasa webasa zvakare unobvumidza iwe kuti uite mamwe akawanda mabasa akadai sekuwedzera vashandi kana kugadzira mabhokisi ekugamuchira.
Pahwindo re software, pane maviri makuru sarudzo. Yekutanga ndeye iyo inobvumira kusvika kure. Yechipiri inobvumira manejimendi emusangano. Panyaya yekusvika kure, une sarudzo mbiri. Unogona kutanga famba kure nekombuta yemunhu nekuratidza ID yake uyezve password yake. Kupa mvumo yekuenda kure, uchafanirwa kugovera hunhu hwako nemunhu ari kuda kuwana komputa yako. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutaurirana uku kunogona kuitika chete pakati pemakomputa maviri. Chimwe chikamu cheTeVVerver ndiyo kuronga musangano. Chishandiso chinobvumidza iwe kuti uite misangano nevako vaunoshanda navo. Ivo vanozokwanisa kuona munguva chaiyo izvo zvinoratidzwa pane desktop yecomputer inobata musangano. Kuti ugadzire musangano, zvese zvaunofanirwa kuita kuenda kune iyo "Musangano" tebhu. Kubva ipapo, unogona kuzadza fomu rine ruzivo nezve musangano (ID yemusangano, password, nguva yekutanga, nezvimwewo). Idzi ruzivo runofanirwa kutumirwa kune avo vanobatwa ne tsamba kana nefoni. Unogona kutanga chirongwa nekuenda ku "Misangano yangu". Nekudzvanya pane iyi link yakatumirwa kwavari, vanokoka vanokwanisa kuwana musangano.
VERENGA Iyo Yakazara Rondedzero Yekhibhodi Pfupi pane Windows 10
Izvo zvakanaka uye zvakaipa zveTeVVerver
Kubatsira kune TeamVieawer ndeyekuti inobvumira basa riri kure pane landline nekukurumidza uye nyore. Iwe haufanire kuve uripo munyama kuti ufambise mberi basa rako muhofisi, iyo inobatsira zvikuru kunyanya panguva yekurova. NeTeamViewer, iwe unongofanira kusiya kombiyuta yako iri kushanda kuti uwane iyo kubva kune chero komputa kana smartphone uye nenzira yakachengeteka.Vanhu vanoda kuwana mukana webasa ravo nyore nyore vasina kuchengeta chero rudzi rwechigarire pavari. zvinhu zvichazvikoshesa. Nekudaro, kunyangwe paine mwero wekuchengetedza unopihwa nesoftware, kushandiswa kwayo kunoita kuti mamwe maitiro ekudzivirira adikanwa. Yekutanga kuremekedza haizo kupa mukana kune yako kombiyuta kune chero munhu. Nekusiya, semuenzaniso, chikamu chinovhurwa zvachose muhofisi ine mukana wakasununguka.
Shanda kure neTeamViewer panguva yekurova Kubvumbi 25th, 2020Tranquillus
pashureSmartnskilled: online kudzidzisa saiti kusangana zvese zvinodiwa
zvinoteveraShanda muzvikwata uye nekure kure neSlack .. Tauriranai munguva chaiyo
Unyanzvi hunokosha hwokukuridzira muhofisi yekugadzira